Dadka Shirci la'aanta ah ee ku nool Mareykanka - BBC Somali
Dadka Shirci la'aanta ah ee ku nool Mareykanka
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa la hadlay dadka Maraykanka waxa uuna soo bandhigay isbadeladdii ugu ballaarnaa ee lagu sameeyo hanaanka socdaalka ee dalka maraykanka, hanaankaas oo ay dhibaato ka taagnayd tobonaan sano.
Waxa uu sheegay in si ku meel gaar ah uu sharci- deganaansho ah u siin doono dad lagu qiyaasay shan milayn oo qof kuwaas oo si sharci daro ah ku soo galay maraykanka.
Dadkan waxay u badnaan doonaan waalidiinta caruurta ku dhalay maraykanka, iyo dadka mudada badan joogay maraykanka. si haddana ay uga faa'ideystaan hanaankan, waxay u baahanayaan in ay bixiyaan cashuurta, iyo in aanay gelin dambiyo.
Sidoo kale madaxweyanaha waxa uu sheegay in la soo dedejin doono dadka ay tahay in laga musaafuriyo dalka maraykanka.
Haddaba si aanu wax badan uga ogaano sharciyan tallaabada uu qaaday madaxweyne Obama, ayaa waxaanu la xiriirnay Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ah qareen ku takhasusay arrimaha dastuurka iyo socdaalka, waxa uu u warramay weriyaha BBC Maxamed Xaaji Xuseen